HEGERLS mezzanine manenjika
Mezzanines dia hamela anao hampiasa ny haavon'ny trano fitehirizana avo indrindra ary hampitomboana avo roa heny na ho avo telo heny ny velaran'ny velarantany.
Ny manampy Mezzanine dia mety ho fomba ara-toekarena indrindra hampitomboana ny toerana fitahirizan-trano raha tsy misy ny vidin'ny fanitarana trano mahazatra.
◆ Ampitomboina ny haavon'ny fitehirizana sy ny fampiasana habaka;
◆ Nozaraina tamin'ny gorodona 2-3 toy ny mahazatra izay afaka mitondra 300-500kg / ㎡
◆ Ny kargôo amin'ny rihana voalohany amin'ny mezzanine no mavesatra indrindra ary ny andry tsirairay dia afaka mitondra 500kg iraisana, atambatra amin'ny sarety tanana na trolley hydraulic manual. Ny kargôo amin'ny rihana faharoa sy fahatelo amin'ny ankapobeny dia 300 kg isaky ny andry ary atambatra amin'ny sarety tanana;
◆ Masinina fitaterana: Sehatra fiakarana, hoister, conveyor na forklift;
◆ Vidiny mora ary miditra amin'ny alàlan'ny karazana kargos mora.
◆ Ireo fizarana misy ny rafitra dia misy zana-kazo mahitsy, hazo, gorodona, laminaty, tohatra ary meshes tariby.
◆ Fizarana fifandraisana: Voahidy;
◆ Sokajy gorodona: fampiasana rihana miolikolika mangatsiaka, toy ny gorodona glasy, gorodona misolelaka, gorodona voahosotra ary gorodona voaravaka; Mifandray amin'ny hazo amin'ny alàlan'ny rafitra mifamatotra sy tsara amin'ny ankapobeny.
HEGERLS mezzanine mitaingina 300kgs kalitao 2021 isaky ny toradroa miaraka amina paosin-kery ho an'ny fitehirizana ampahany kely
Manome HEGERLS mezzanine mitaingina kalitao 2021 avo lenta 300kgs isaky ny toradroa miaraka amina famonoana herinaratra ho an'ny fitahirizana ampahany kely .. Manokana ny tontolon'ny fitehirizana entana izahay mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
Fampidirana vokatra ny talantalana mezzanine
Mezzanines dia hamela anao hampiasa ny haavon'ny trano fitehirizana ary hampitomboana avo roa heny na ho avo telo heny ny velaran'ny velarantany.
mahitsy Fampidinana ara-nofo Loko lalina
55 * 56/80 * 70 300kgs isaky ny toradroa SS400 RAL5005 / RAL2004 600-1200mm
Production antsipirihany ny mezzanine talantalana
Ny sehatry ny drafitra dia misy zana-kazo mahitsy, hazo, rihana, voasarimakirana, tohatra ary meshes tariby.
Teo aloha: Warehouse Storage Heavy Duty Steel Pallet Racking System
Manaraka: HEGERLS mitondra fiara amin'ny rafitra fitifirana
Rihana Mezzanine vy